အနုပညာသတင်း Archives - Online Hartha
အိမျဌားခအတှကျ အခကျအခဲဖွဈနရှောတဲ့ လူရှငျတျောကွီး ဦးတိမျညှနျ့
“အိမ်ဌားခအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးတိမ်ညွန့်” ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့ဆိုရင် လူရွှင်တော်ကြီးဦးတိမ်ညွန့်ရဲ့ အိမ်လိုင်းခန်းလေး ရက်စေ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြည်သူချစ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးတိမ်ညွန့်အနေနဲ့ အိမ်ငှားခ (လိုင်းခန်း) ပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သွားရောက်ကူညီလှုဒါန်းချင်သူများအတွက် တောင်ဒဂုံ (၂၂) ရပ်ကွက် ၊ရတနာပုံ (၆)လမ်း၊ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းရှေ့ လိုင်းခန်းမှာ လူရွှင်တော်ဦးတိမ်ညွန့် အိမ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းလှူဒါန်းကူညီနိုင် ကြောင်းသိရပါတယ်…။ အားလုံးလဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…။ Unicode Version “အိမျဌားခအတှကျ အခကျအခဲဖွဈနရှောတဲ့ လူရှငျတျောကွီး ဦးတိမျညှနျ့” ဩဂုတျလ ၁ဝရကျနဆေို့ရငျ လူရှငျတျောကွီးဦးတိမျညှနျ့ရဲ့ အိမျလိုငျးခနျးလေး ရကျစပွေီ့ဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။ ပွညျသူခဈြတဲ့ လူရှငျတျောကွီးဦးတိမျညှနျ့အနနေဲ့ အိမျငှားခ (လိုငျးခနျး) ပေးဖို့ အခကျအခဲဖွဈနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ သှားရောကျကူညီလှုဒါနျးခငျြသူမြားအတှကျ တောငျဒဂုံ (၂၂) ရပျကှကျ ၊ရတနာပုံ (၆)လမျး၊ဖူဆယျဘောလုံးကှငျးရှေ့ လိုငျးခနျးမှာ လူရှငျတျောဦးတိမျညှနျ့ … Read more
တပျမ အမတှနေဲ့ ရပျတညျခကျြမတူပဲ တမူထူးခွားတဲ့ လုပျရပျတဈခု ထပျလုပျခဲ့တဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ
July 24, 2021 by Online Hartha
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တပ်ဘောမ အစ်မတွေနဲ့ ရပ်တည်ချက်မတူဘဲ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာအပြင်အသံချိုချိုလေးနဲ့တေးသီချင်းကောင်းများစွာကိုလဲတီဆိုထားပါသေးတယ်၊ စိုးပြည့်သဇင် ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတုအမှန်တရားဘက်ကနေပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ဖြူဖြူစင်စင်၊အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ အိနြေ္ဒရှင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လူကြီး၊ လူငယ်ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် က တော့ လက် ရှိ မှာတော့ အသက် (၂၈) နှစ်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် ကလေး လေးတစ်ယောက်လိုပဲ ဘဝကို အပူ အပင်ကင်းကင်းနဲ့ နေ ထိုင် တတ် သူ တစ်ယောက် ဖြစ် ပါ တယ် ။ မင်းသမီးချောလေး … Read more
သရေငျလညျးသလေိုကျပါတော့လို့ အျောငိုရတဲ့အထိ ကိုဗဈရောဂါကို အလူးအလဲအံတုခံစားနရေတဲ့ မမေီကိုကို
July 18, 2021 by Online Hartha
MRTV-4 ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော မေမီကိုကိုကနော့ လက်ရှိမှာ Covid 19 ရောဂါ ကူးစက်ခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်..။ ရောဂါကူးစက်ခံရတာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေတာ (၁၀)ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဂရုစိုက်နေထိုင်စားသောက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အဖျားဝင်ပြီး (၅)ရက်လောက် အစားမဝင်ခဲ့ပေမယ့် အနံ့စပျောက်တဲ့ နေ့ကတည်းက ကြိတ်မှိတ်စားသောက်နေပြီး ရောဂါကို အလူးအလဲခံစားရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပြောပြလာပါတယ်..။ ကိုယ်အလေးချိန်လည်း ကျသွားခဲ့ရပြီး လက်ရှိမှာတော့ အနံ့ပြန်ရနေကာ ပရိသတ်တွေကိုလည်း စိတ်ဓာတ်မကျဖို့နဲ့ အစားများများစားပြီး ကျန်းမာအောင် နေကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်..။ “ရက်ပေါင်း၁၀ရက်ကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါပြီ….စားတယ် ငိုတယ် အိပ်တယ်… ဒီသုံးမျိုးနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်…. စဖျားတုန်းက ၅ရက်လောက်အစားမဝင်ပါဘူး အနံ့စပျောက်တဲ့နေ့တည်းက သေမှာမကြောက်ပေမဲ့ သေသွားမှာ စိုးတာနဲ့ အကုန်ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပါတယ်… အရင်က ဝိတ်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ ငါးပိရည်နဲ့ … Read more
ပြေတီဦးနဲ့ အူဝဲတို့နှစ်ယောက် Live လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေး
July 9, 2021 by Online Hartha
ပြေတီဦးနဲ့ အူဝဲတို့နှစ်ယောက် Live လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေး Live လွှင့်ကာ တေးသရုပ်ဖော်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူပြေတီဦးကြောင့် အားရပါးရ ရယ်မောသဘောကျနေတဲ့ အူဝဲရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး.. ပရိသတ်ကြီးရေ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ကတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ ဖြင့် အရေးယူခံထားရပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရပါတယ်နော်။ ပရိသတ်များကလည်း သူတို့ရဲ့ အိုင်ဒေါလင်မယားအတွက်ပူဆွေးနေကြရပါတယ်နော်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ တူမ မေတိုးခိုင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်တော့ ပါမလာခဲ့ပါဘူးနော်။ သားနဲ့ သမီးကို ခွဲပြီး ထောင်ထဲမှာ နေနေရတဲ့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးအတွက် တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာပါပဲနော်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း သူတို့ရဲ့ အိုင်ဒေါလင်မယားပျော်ရွှင်စွာ ပွဲတက်ခဲ့ကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ပြန်တင်ပြီး သတိတရရှိနေကြပါတယ်နော်။ ထောင်ထဲမှာ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးပရိသတ်ကြီးရေ…။ Unicode Version … Read more
နောကျဆုံးစကားပွောခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတျတရတှနေဲ့ ရမှေနျဆီက ခှငျ့တောငျးပွီး Cover Song ပွနျလညျသီဆိုထားတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ရဲ့သီဆိုမှု
July 4, 2021 by Online Hartha
Idiots အဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော် ရေမွန်ကတော့ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဆုံးပါးကွယ်လွန်ကာ အားလုံးကိုခွဲခွာသွားခဲ့တာကြောင့် မိသားစုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက ယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် သူ့ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ အနုပညာတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ ထင်ကျန်ခဲ့ရသလို လူငယ်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကလည်း Cover Song ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ပါတယ်..။ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကကို များစွာရရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များလွန်းတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ “ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ” သီချင်းလေးကို Cover Song ပြန်လည်သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရေမွန်သီချင်းတွေကို အားပေးလာပြီး အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ Cover ပြန်ဆိုချင်ပေမယ့် Legend ကြီးမို့ ပြန်ဆိုရမှာ ကြောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအပြင် နှစ်ယောက်သားစကားပြောခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေကိုလည်း အုပ်စိုးခန့်က ပြောပြလာပါတယ်..။ သီချင်းကို ဆိုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ကြောင့် သီချင်းပျက်သွားမှာ ကြောက်နေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကို အားပေးပြီး ဆိုခိုင်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရစကားလေးတွေကလည်း ရေမွန်ရဲ့ … Read more
အကယျဒမီ(၇)ဆုပိုငျရှငျ မငျးသားကွီး ဦးညှနျ့ဝငျး ကှယျလှနျ
July 1, 2021 by Online Hartha
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ဂန္တဝင် အနုပညာရှင် အကယ်ဒမီ(၇)ဆုပိုင်ရှင် ဦးညွန့်ဝင်း -အသက် (၈၁) ဟာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက် မှာ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။ အစားထိုးမရတဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်ကြီး ကြွေလွှင့် သွားတဲ့ အတွက် ပရိသတ်တွေနဲ့ အတူ အထူးဝမ်းနည်းရပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ညွှန့်ဝင်းက သူ့ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ခေတ်သုံးခေတ်တိုင်တိုင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ညွှန့်ဝင်းက “ဗန်တိုလူလေးနဲ့သူဇာ”၊ “ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်”၊ “တတိယအရွယ်၏ ဒုတိယဝေဒနာ”၊ “သီတာခုနှစ်တန်”၊ “သူ့ကျွန်မခံပြီ”၊ “ဆန်ရေ”၊ “လျှို့ဝှက်သောနှင်း” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ အကယ်ဒမီ (၇) ဆုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ 😢😢😢🙏🙏🙏 … Read more
June 28, 2021 by Online Hartha
ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ရှိမြင်ကွင်းများ…. ပရိသတ်ကြီး ရေ နှုတ်ခမ်းနီမလေးများရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသား ပိုင်တံခွန်ကိုတော့ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ထဲ မှာ စစ်ကောင်စီ က ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားထားတာပါနော်။ ပိုင်တံခွန်သာ မက အခြားသော အနုပညာရှင် များစွာ လည်း အင်းစိန်ထောင်ထဲ မှာ ပါပဲနော်။ သူဟာ တောထဲတွင် ခဏ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ပေမယ့် ဌက်ဖျားရောဂါဝေဒနာ ခံစား နေရတာ ပါနော်။ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ကလည်း လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင် တာကြောင့် တွဲခေါ် သွားခဲ့ရတဲ့ အထိ ပါပဲနော်။ စစ်ဆေး ရုံတွင် ဆေးကုသ ပေးတယ်လို့ သတင်းတစ်ချို့ထွက်ခဲ့ပေမယ့် တကယ် မဟုတ်ခဲ့ ပြန်ပါဘူးနော်။ အခု လက်ရှိ … Read more
ပရိသတျတှေ မမွငျဘူးသေးတဲ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အမှတျတရ ဗီဒီယိုလေးတဈခုကို ထုတျပွလာတဲ့ “K”
June 27, 2021 by Online Hartha
အဆိုတော်ရေမွန် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာ အခုချိန်အထိ ဘယ်သူမှ မယုံနိုင်သလို လက်မခံနိုင်ကြသေးပါဘူးနော် ။ ရေမွန်က သီချင်းတွေ ဖန်တီး သီဆိုရာမှာလည်း အရမ်း တော်ပြီး သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်အများအပြားကိုလည်း အခိုင်အမာ ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလို ရုတ်တရက် နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ရေမွန်အတွက် အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်အထိလည်း သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေ အမှတ်တရလေးတွေကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ပရိသတ်တွေဆို ရေမွန် ပုံရိပ်တွေ နာမည်တွေပါ တက်တူး ထိုးခဲ့ကြသည်အထိ ပါပဲ ။ ရေမွန်က ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းပြီး မာန်မာနမရှိ ရိုးသားကြိုးစားသူလေးမို့ ပိုလို့တောင် နှမြောတသ ဖြစ်နေကြတာပါ ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ရေမွန်ပါမက တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးအတွက်ပါ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ … Read more
“မကှယျလှနျခငျမှာ ခဈြသူအတှကျ Surprise Gift ၊Silk Dressလေး မှာပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတျောရမှေနျ”
June 26, 2021 by Online Hartha
ရေမွန်က သူ့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်မလေးအတွက် Surprise Gift လေး ပို့ပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ 12 ရက်နေ့က မှာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုမှာခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူမှာခဲ့တဲ့ ဆိုင်က ခုလို ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ် “ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကိုရေမွန်က သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကို Surprise Gift ပို့ပေးဖို့ Silk Dress လေး ချုပ်ပေးဖို့ လှမ်းမှာခဲ့ပါတယ်။😢 ဒီနေ့ပဲ ကိုရေမွန့် ကောင်မလေးအတွက် မှာခဲ့တဲ့ Silk Dress လေးချုပ်ပြီးပါတယ်။ အဝေးက ကိုရေမွန်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ညီမလေး K အမှတ်ရနေစေဖို့နဲ့ အမှတ်တရသိမ်းထားဖို့ ပေးပို့လိုက်ပါရစေ။ ကိုရေမွန့်ပရိတ်သတ်ဖြစ်တဲ့ မင်မင်တို့မှာလည်း မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းခံစားရပါတယ်။ မြင့်မြတ်သော ဘုံဘဝမှာ အနားယူပါတော့ ကိုရေမွန်ရေ…🙏🙏🙏”ဆိုပြီး တ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် … Read more
ထိုငျးဘကျက သူ့ဝငျငှတှေသေိရငျ ရူးသှားလိမျ့မယျလို့ ပွောလာတဲ့ နဆေနျး
June 25, 2021 by Online Hartha
ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ နေဆန်းကတော့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတင်ပြီး လူသိများလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ လှပတဲ့ အမူအရာအပြောအဆိုတွေကြောင့်လဲ လူအများရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ် ထို့ပြင် နေဆန်းဟာ ပရိတ်သတ်အားပေးကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ဝင်ငွေများနှင့် သိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ အိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆောက်လုပ်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်… နေဆန်းက လက်ရှိမှာတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိကာ အောင်မြင်မှုတွေလဲ သီးပွင့် ဆွတ်ခူးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်… နေဆန်းက အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်မှာလဲ သူ့အလုပ်တွေကို မနားပဲ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်… နေဆန်းဟာ အာဏာသိမ်းခံရတာတောင်မှ ဂရုမစိုက်ပဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မပါဝင်ပဲငွေရဖို့အလုပ်တွေ ဆက်တိုက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှု ကို အပြင်းအထန်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်… မကြာသေးမှီကပဲ နေဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြောငြာများရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ ကြောငြာပိုစတာများ ဖြုတ်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်… ဖြူဖြူထွေးဟာလဲ ၄င်းနည်းတူ ကျော်ငြာလုပ်ငန်းများဖြုတ်ချပိတ်သိမ်းခံထားရပါတယ်… နေဆန်းဟာ ယခုသူရဲ့ … Read more